Ireo mpamatsy rano tsara indrindra ho an'ny alika: mandeha ho azy, lehibe ary ... | Tontolo alika
Mpamatsy rano alika
Ireo biby fiompintsika dia tsy maintsy miaina fomba fiaina mahasalama ary ao anatin'izany dia ilaina ny fampiononana sy ny fisotroana. Noho izany, raha te hanana rano mangatsiaka kokoa ianao dia fotoana tokony hilokana a dispenser rano alika. Satria hankafy rano madio kokoa ianao mandritra ny andro.
Amin'ity fomba ity dia tsy hanahirana anao ny manova ny lovia amin'ny rano foana. Miaraka amin'ireo dispensera, ankoatry ny famonjena anao miasa dia manana tombony maro hafa tokony ho fantatrao izy ireo. Satria ny tena ilaina dia hydrated tsara foana izy ireo ary tsy misy mahantra na inona na inona. Tsy mieritreritra ve ianao?
1 Ireo mpamatsy rano tsara indrindra ho an'ny alika
2 Karazana mpizara rano alika
3 Ny fomba fiasan'ny dispenser an'ny alika
4 Amin'ny tranga iza avy no mora ny manana mpizara rano ho an'ny alika?
5 Aiza no hividianana dispenser rano alika mora vidy
Ireo mpamatsy rano tsara indrindra ho an'ny alika
Ity misy safidy iray amin'ireo mpizara rano atoro indrindra ho an'ny alika. Na inona na inona safidinao, dia hokapohinao ny iray amin'izy ireo:
Ferplast Dispenser ...
Tavoahangy rano Toozey...
Pets Meipire - Mpanome...
Karazana mpizara rano alika
YGJT Dispenser ...
Araka ny tondroin'ny anarany dia misy ilay fantatra amin'ny anarana hoe dispenser rano mandeha ho azy. Io no iray amin'ireo be fangatahana indrindra ary tsy gaga izahay satria miaraka amin'izany ny biby fiompinay dia hanana foana ny rano ilainy, madio sy vaovao. Ny modely toy izao dia handraraka rano ho azy, ka tsy hanahy izany isika, satria hisy rano foana ao anaty vilia farany. Toy ny fitsipika ankapobeny dia tsy maintsy mameno karazana amponga ianao ary haharitra ela kokoa noho ny noeritreretinao azy.
WEGOLIMME Fuente para...
Azonao atao ny manararaotra ary misafidy ny mpaninjara herinaratra izay azo ampiharina indrindra koa. Tsy maintsy ampidirinao ao anaty fantsona elektrika fotsiny izy ireo ary afaka segondra dia hanome anao rano madio koa izy ireo mba hahafahan'ny alika hidiran-drivotra milamina. Amin'ity tranga ity, mazàna izy ireo dia maodely am-boalohany kokoa amin'ny endrika loharano na riandrano, izay tsy ratsy ihany koa amin'ny fampidirana ny fikitika voalohany indrindra.
Amin'ny maha mpizara rano alika azo entina azy, mihena ny habeny. Ho fanampin'izany, matetika dia manana safidy maromaro isika fa ny iray amin'izy ireo dia ilay iray manana endrika tavoahangy ary mifarana amin'ny tapany ambany na sotro lehibe, izay hivoahan'ny rano. Azonao atao koa ny mitondra azy io nefa tsy maka toerana malalaka ary mieritreritra fa manana alika foana ny alikanao amin'izay alehanao.
Izy io dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina indrindra amin'ity karazana kojakoja ity, noho izany tsy maintsy ataontsika antoka foana fa afaka BPA izy ireo ary koa ny poizina hafa. Na dia matetika aza dia izany no izy na inona na inona marika na famaranana. Hatramin'izany fomba izany no ahazoantsika antoka fa miatrika vokatra mahasalama kokoa ho an'ny biby fiompinay izahay. Ary eny, mahatohitra ihany koa ny fizotry ny fotoana sy ny fampiasana azy.
Teekit Nuevo comedero...
Ny fahaiza-manao dia iray amin'ireo teboka hodinihina hatrany. Noho izany, na ho an'ny alika lehibe izany na raha manana biby maro ao an-trano ianao, dia omena dispenser lehibe kokoa. Toy izany koa raha mila avela irery mandritra ny ora maro ny biby fiompy, dia ilaina ihany koa ny fananana fahaiza-manao ampy hahazoana antoka fa hanana ny ranony madio foana izy ireo rehefa mila izany.
Raha kely ny alikanao dia manana iray fotsiny ianao, na mandany fotoana kely tsy misy orinasa, dia azonao atao ny misafidy dispenser lehibe kokoa. Izy io koa dia hanao ny asany amin'ny fomba lavorary ary, misaotra azy isika, tsy afaka manahy ny handatsaka rano ao anaty vilia ao anatiny isika. Ka tsy mila mameno azy io matetika isika.
Ny fomba fiasan'ny dispenser an'ny alika
Efa hitantsika fa misy maodely mpandefa rano ho an'ny alika izay mety ho hitantsika. Fa raha ny fitsipika dia manana ampahany izy ireo dia ny fitahirizana ary ny iray hafa dia ny ampahan'ny lovia izay latsaka ny rano. Noho izany, amin'ny maro modely toy ny mandeha ho azy na herinaratra dia hanana famatsian-drano tsy tapaka izay tsy tapaka.
Izany dia satria izy ireo dia mitondra karazana bozy na fanilo mitsingevana ary izy ireo no mifehy ny habetsaky ny rano ao anaty lovia. Ka raha mahatsikaritra ianao fa efa misy dia hampijanona azy tsy hianjera bebe kokoa. Tsotra toy izany! Na dia marina aza fa misy modely hafa amin'ny endrika loharano iray izay mivoaka tsikelikely ny rano ary ny hafa izay mekanika tsy maintsy ampandehanana amin'ny fanitsahana ny tongotra. Na dia ampiasaina aza ity farany rehefa be ny alika.
Amin'ny tranga iza avy no mora ny manana mpizara rano ho an'ny alika?
Efa hitantsika fa izy io dia iray amin'ireo fitaovana azo ampiharina indrindra ananantsika. Ka tsy mandeha intsony ny filazana fa miavosa ny tombony. Rahoviana ianao no tena mila an'io?
Rehefa mandany ora maro ny biby fiompinao: Raha mandeha miasa ianao ka mila avela irery dia ilaina ny manana mpanome rano ho an'ny alika, mba hanananao rano madio hivezivezy foana.
Rehefa manana biby fiompy maromaro izahay ao an-trano: Raha tokony havela lovia azo ariana na maloto, tsy misy toa ny dispenser. Mitahiry rano bebe kokoa dia ho ampy hanomezana ny biby rehetra ananantsika.
Misotro rano bebe kokoa àry izy ireo: Raha hitanao fa tsy misotro alika ny alikanao, dia mamporisika mpitsinjara izahay. Satria izany dia ho antony manentana ny fahitana ny fianjeran'ny rano ary hanakaiky imbetsaka kokoa noho ny eritreretintsika izy ireo.
Mba hialana amin'ny aretin'ny voa: Ny iray amin'ireo tombony lehibe tsy maintsy raisintsika dia ny rano izay mandalo ao amin'ny dispenser dia tsy misy loto ary madio kokoa. Midika izany fa mikarakara ny fahasalaman'ny biby volom-borona isika nefa tsy fantatsika izany.
Rehefa lehibe ny alika: Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria ny haben'ny alika resahina dia mamaritra ny habetsaky ny rano ho laniny. Noho izany, mba tsy hamenoana azy io indraindray, dia ho eo ny mpanampy.
Aiza no hividianana dispenser rano alika mora vidy
Amazon: Samy ny mpaninjara rano fototra ary ireo mandeha ho azy na mandeha amin'ny herinaratra hiandry anao any Amazon izy ireo. Izy io dia iray amin'ireo toerana anananao safidy bebe kokoa, koa ny fifidianana izay iray mety indrindra amin'ny biby fiompinao dia ho haingana sy ho mora kokoa ihany koa. Hanan-danja be ianao isan'andro, ary koa amin'ny tolotra indraindray tsy azonao lavina.
kiwiko: Ny marina dia raha tianao ny maodely fototra kokoa hanombohanaKiwoko dia efa manana azy ireo amin'ny vidiny tsy ampoizina. Satria amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manangona kely kely isaky ny fividianana ary mandany izany amin'ny vokatra hafa mitovy na mila hafa. Azo antoka fa hahagaga anao ihany koa ny tolo-kevitr'izy ireo.
Matetika: Na tao amin'ny fivarotana biby fiompy dia tsy te-tsy hahita ny matso mpanondrana rano ho an'ny alika izy ireo. Noho izany, manana safidy izy ireo izay mety amin'ny firesahana ny hevitra fototra indrindra. Famaranana, loko ary fitaovana samihafa miaraka amin'ny vidiny mora tokoa. Efa azonao antoka ve hoe iza amin'izy ireo no ho anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Mpamatsy rano alika
Ahoana ny fomba famongorana ny fofon'ny mimi alika
Cages ho an'ny alika